Ukuxhathisa kangakanani iXiaomi Redmi Qaphela 9 Pro | Iindaba zeGajethi
Ukuxhathisa kangakanani iXiaomi Redmi Qaphela 9 Pro
Kwi-90s, xa iifowuni eziphathwayo (zazingekabikho ii-smartphones) zazinokufikelelwa ngabantu abaninzi, iplastiki yayiyeyona nto isetyenziswayo ngaphandle, kuba ngenxa yokuguquguquka kwayo, ukumelana ngokugqibeleleyo nokuwa kunye / nokubetha. Ukongeza, yayiyeyona ndlela yokunciphisa iindleko kwishishini elikhulayo.
Njengoko itekhnoloji iqhubekile, hayi kuphela izikrini ezikhudlwana, kodwa kunye nezinto zokwakha bebeke ecaleni iplastikhi (nangona isafumaneka kwezona zitheminali zitshiphu) zealuminium, intsimbi kunye neglasi. Ezi zinto azifunxi izothuso njengeplastiki, uninzi lwabasebenzisi lukhetha ukusebenzisa iziciko.
Kwii-90s nakwii-2000s zakuqala, ii-inshorensi zazisetyenziselwa ukubamba iselfowuni ebhantini, hayi ukuyikhusela ekuqhekezeni utshintsho lokuqala kwimeko yokuwa, njengoko kunjalo nanamhlanje. Ukuba ujonga i-smartphone erhabaxa leyo sukutyumka kutshintsho lokuqala, IXiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro lukhetho oluhle lokuqwalaselwa.
1 Xiaomi Redmi Qaphela 9 Pro ukumelana
2 Xiaomi Redmi Qaphela 9 Pro iinkcukacha
Xiaomi Redmi Qaphela 9 Pro ukumelana
Inqaku le-Remi 9 Pro ligutyungelwe ngumaleko weglasi obonakalise ukuba yenye yezona zinto zixhathise kakhulu kwintengiso, nangona nakuphi na ukuwa ngengozi kusenokuvela ubunzima kwisiphelo. Abafana beXiaomi baqinisekile ngokunyaniseka kwesiphelo sabo ukuba bathumele ividiyo kwiYouTube ukuze siyibone inokumelana njani nokuyibeka kuvavanyo olwahlukileyo ukusuka ekuweni, kutshintsho ngequbuliso kubushushu, ukudlula kuvavanyo ngalunye kunye neziphumo ezigqwesileyo.
Kwakhona, njengabavelisi abaninzi, Inika ukhuseleko ngokuchaphazela amanziUkukhuselwa kwe-IP68, ke ukuba i-terminal iba manzi kancinci asizukuba nangxaki. Iselfowuni, njengazo zonke esinokuthi sizifumane kwintengiso kunye nesatifikethi esifanayo, asinako ukuntywila (nangona abanye abavelisi besisebenzisa njengebango lentengiso).
Kusenokwenzeka ukuba ngeentsuku zokuqala, ukuba sinokuntywila itheminali emanzini ukuze sithathe iifoto ezimnandi zeholide yethu ngaphandle kwesiphelo esifumana nawuphi na umonakalo. Nangona kunjalo, ngexesha lokusetyenziswa kwesiqhelo, zonke ii-smartphones bafumana ikhefu elincinci ezingabonakaliyo ngeliso lenyama kwaye ekuhambeni kwexesha kunokubangela ukuba inxenye yesixhobo yaphule ngokupheleleyo kwaye amanzi anokungena ngaphakathi.
Ngaphandle kokuba ubonakalisile ubunzima besi siginali, njengabanye abavela kumenzi ofanayo, ukuba ifowuni yakho inengxaki, uneendawo ezahlukeneyo zokuyilungisa. Lungisa iXiaomi yakho kwiNkonzo10 Olukhetho oluhle kakhulu ekufuneka uluthathile, hayi amaxabiso alo kuphela, kodwa kunye nesantya senkonzo.
Xiaomi Redmi Qaphela 9 Pro iinkcukacha
KwiActualidad Gadget sibe nethuba lokuhlalutya Xiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro, i-terminal ethi, njengoko sigxininisa kwiindawo ezintle, ime ngokutsiba esemgangathweni kulwakhiwoUkuzimela kude kakhulu kuninzi lweetheminali esinokuzifumana kwimarike kunye neempawu / umyinge wexabiso esingazukufumana nakwabanye abavelisi.
IXiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro ime ngaphandle, ukongeza kwizinto zokwakha eziyinika ukubonakala kwepremiyamu, kwiscreen se-6,67-intshi ngesisombululo se-FullHD +, esinefomathi ye-20: 9. Iprosesa, iQualcomm's Snapdragon 720, ihamba kunye I-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina (indawo eyandisiweyo ngamakhadi e-MicroSD).
Icandelo lokufota, ezinye izinto ezinomdla kwesi sigxina, Iqaqambisa inzwa ephambili ye-MP eyi-64, i-8MP ebanzi ye-engile, i-2 MP ye-sensor ye-portraits kunye ne-5 MP macro lens, isivamvo esivumela ukuba sithathe imifanekiso yeenkcukacha ezingafumanekiyo kwiindawo ezininzi zentengiso. Ikhamera ye-selfies ifikelela kwi-16 MP (ayiyiyo i-angle ebanzi) ibekwe kwindawo engaphezulu ephezulu kwesikrini.
IXiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro iyasivumela Ukurekhoda iividiyo kumgangatho we-4K kwii-30 fps, nangona sikhetha esi sisombululo, indawo yokugcina yangaphakathi iya kuphuma ngokukhawuleza ngaphandle kokuba sisebenzisa ikhadi le-MicroSD ukuyigcina.
Ibhetri, enye into ebalulekileyo kwesi sigxina, ifikelela kwi-5.020 mAh kwaye iyahambelana nokutshaja okukhawulezayo kwe-30W (itshaja efakwe ebhokisini), ethi ivumela ukuba senze okungaphezulu kokusebenzisa kakhulu i-terminal usuku nosuku ngaphandle koloyiko lokuphuma ngaphandle kwentlawulo kutshintsho lokuqala, ukuyenza ukuba ibe siselfowuni efanelekileyo kwabo bantu bachitha usuku kude nekhaya kwaye abanalo ithuba lokukuhlawulisa ngokulula.
Ngokumalunga nexabiso, iXiaomi Redmi Qaphela i-9 Pro inokufumaneka nakweyiphi na ivenkile ngaphantsi kwama-euro angama-200.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukuxhathisa kangakanani iXiaomi Redmi Qaphela 9 Pro